Marii Addis Wag: 'Itoophiyaatti olaantummaa seeraa kabachiisuun ajandaa waqtaawaadha' - BBC News Afaan Oromoo
Magaalaa Dirree Dhawaatti mataduree 'Ijaarsa biyyaafi waliigaltee biyyaalessaa' jedhuun mari'atamaa jira.
Marii maqaa 'Addis Wag' jedhamun waamamuufi waajjira Ministira Muummeen qophaa'e kana irratti paartiileen siyaasaa, hayyoonni, abbootiin amantaafi angawootni naannoolee Affaar, Somaaleefi Oromiyaa godina Harargee Bahaa irraa dhufan hirmaachaa jiru.
Marii guyyaa tokkoof turu kana irratti dhimmoota akka ijaarsa sabaa, gahee mootummaan waliigaltee biyyaalessaa uumuu keessatti qabu, dhimma eenyummaa biyyaalessaafi sirna garaagarummaa hammate akkasumas haala waqtaawaafi kallattii gara fuulduraa dhimmoota kunneenii irratti ni mari'atama.
Waajjira ministira mummeetti itti gaafatamaa pireesii kan ta'an Obbo Nugusuu Xilaahun "mariin 'Addis Wag' barmaatii wal dhaggeeffachuufi waliin mari'achuu dagaagsuuf gargaara," jedhan.
Olaantummaa seeraa kabachiisuun biyyattii keessatti ajandaa waqtaawaadha kan jedhan Obbo Nugusuun, mariin kun tokkummaa biyyaa fi ijaarsa sirna dimokiraasiif gahee akka qabus himaniiru.
Marin 'Addis Wag' kanaan dura matadureewwan akka olaantumaa seeraa, ijaarsa sirna dimokiraasii fi adeemsa jijjiiramaa bara darbee irratti xiyyeeffachuun magaala Finfinneetti mari'atamee ture.
Goodayyaa suuraa Kora kanarratti paartiileen siyaasaa, hayyoonni, abbootin amantaa fi angawootni hirmaachaa jiru
Maricharatti haasaa baniinsaa kan taasisan daayirektarri Sosochii Waliinii Itoophiyaa Haaraa Obbo Obaang Meetoo hundi keenya kan barbaadnu olaantummaa seeraati jedhan.
"Itoophiyaa haaraa uumuufis dhagaa darbachuu osoo hin taanee yaada darbachuu qabna kanaafis wal dhaggeeffachuu qabna," jedhan.
Kana malees hundi keenya itti gaafatamummaa qabna itti gaafatamummaa keenya bahachuufis aarsaa kaffaluu qabna jechuun dubbatan.
Sabboonummaafi ijaarsa biyyaa
Mata duree 'Itoophiyaa keessatti bu'aa bayii ijaarsa biyyaa' jedhuun waraqaa kan dhiyeessan Institiyuutii Qorannoo Nageenyaa Biyyaalessaatti ogeessa qorannoo kan ta'an Dooktar Samiir Yusuuf, 'sabboonummaan Itoophiyummaafi kan sabootaa' yaaddoo ta'uu dubbatu.
Dhimma sabummaa irratti leellistoota sabboonummaa biyyaalessaafi leellistoota sabboonummaa sabaa gidduu wal morkiin akka tureefi sababa wal morkiiwwan kunneeniin ijaarsi biyyaa milkaa'an dhabamuu dubbatu.
Kanaafis eenyummaan keenya bifa walitti bu'uun osoo hin taanee bifa dhimma waliinii qabnun ijaarramuu qaba jechuun, Dr Samir dubbatan.
Kana malees, ijaarsi biyyaa nuti taasifnu saboota biroof yaddoo badiinsaa akka hin taanef of eeggannoo gochuu qabnas jedhan.
Dhimma walitti nu fidu danda'u qabaachuu qabna kan jedhan Dr Samir wanti kunis kan qaama alaatiin nuuf kennamu osoo hin taane nuyi keessaa kan madde ta'uu qaba jechuun himan.
Kana malees, sodaafi kaayyoo walii irratti mari'achuun ijaarsa biyyaaf faayidaa qabeessa ta'uu dubbatan.
Dura taa'aan paartii uummata Affaar Dooktar Koonte Muusaa gahee mootummaan waliigaltee biyyaalessaa uumuufi ijaarsa biyyaa keessatti qabu ilaalchisuun yaada marii dhiyeessan.
Dr Koonteen ijaarsi biyyaa akka milkaa'uf qoodinsi aangoofi qabeenyaa qixa ta'e guutuu biyyattiitti hojiirra oolu qaba jedhan.
Akka fakkeenyaattis waajjiraalen ministiraa teessoo isaanii Finfinnee qofa osoo hin taanee magaalota naannolee biroo keessa gochuu barbaachisa jechuunis dubbatan.
Dhaabbilee hundeessinu irratti amantaa qabaachuu qabna kan jedhan Dr Koonten akka fakkeenyaattis angawootni ijoollee isaanii biyya alaatti barsiisu taanaan akkasumas wal'aansaaf biyya Taayilaand deemu taanaan ijaarsi biyyaa milkaa'uu hin danda'u jedhan.
Marii dhimma ijaarsa biyyaafi waliigaltee biyyaalessaa jedhuun mari'atamaa jiru irratti hirmaattonni dhaabbileefi iddoowwan garaagaraatii dhufan yaadaafi gaafiwwan qaban dubbataniiru.
Yunivarsiitii Jigjigaarraa kan dhufan Obbo Eliyaas "Hirmaannaan walqixaa biyyattii keessatti ni hanqata," jechuun dubbatan. Rakkoo biyyattiifis sababni uummata osoo hin taanee walitti bu'iinsa hayyuuleefi angawoota gidduu jiru ta'uu himan.
Dr. Leencoo Baati gama isaaniitin rakkoolee biyyattii keessatti mul'atan furuuf dursa sababa rakkoolee beeku qabna jedhan. Kanaafis dursa kaayyoofi maalummaa eenyummaa siyaasaa biyyattii keessatti mul'atanii haalaan hubachuu qabna jechuun himan.
Mootummaa garee hunda bifa qixa ta'een keessummeessu ijaarunis eenyummaan siyaasaa rakkoo uumuu akka hin dandeenye taasisa jedhan. Obbo Lammaa Getaaachaw Ejansii leenjii BLTO Dirre Dawaa irraa ammoo qaal'insi gatii olaantummaan seeraa mirkanaa'uu dhiisusaaf sababa jechuun rakkoo diiangdee mul'atuf dhimma furmaataa gaafatan. Gaafi kanaaf deebii kan laatan dura taa'aan paartii uummata Affaar Dooktar Koonte Muusaa qaala'iinsa gatiif sababni ammayyaa'uu dhiisuu mala omishaa keenyaati jedhan. Akka fakkeenyaattis qonna ammayyeessuun qaala'iinsa gatii midhaanif furmaata ta'uu dubbatan.
Hirmaattota marii dhimma Jiraataa magaala Dirre Dawaa kan ta'an maanguddoo Mahaammad Muusaa immoo garaagarummaa qabnu haala tasgabbaa'en furuu fi heera biyyattii kabajuun walin jireenya uummattoota biyyattiif bu'uura ta'uu himan.
Institiyuutii qorannoo tasgabbiitti ogeessa qorannoo kan ta'an Dooktar Samiir Yusuuf, "biyyattii keessatti gaafiwwan gurguddoo saditu jiru: isaanis gaafii mirga nama dhuunfaa, mirga gareefi gaafii eenyummaa Itoophiyummaati jedhan. Dhimmoota sadeen kunneen deebisuufi walin deemsisuu danda'uunis furmaata," jedhu.
Gaafiwwan kunneenis humanaan osoo hin taanee bifa olaantummaa mirkaneessuun gaafatamuu qabus jedhan.